Shina, Horonantsary Miresaka Fako Plastika Maneho Ny Olana Ara-Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2018 13:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, Nederlands, 日本語, Italiano, English
(Tamin'ny 15 janoary 2015 ny lahatsoratra teny anglisy)
Sarin'ny lahatsary fanadihadiana “Plastic Kingdom” [Fanjakan'ny plastika]. Pikantsary nalaina tao amin'ny Youku.
Miteraka fahasimbana goavana teo amin'ny tontolo iainana ny fitohizan'ny fivoarana katsahin'i Shina amin'ny fomba rehetra nandritra izay folo taona izay, fahasimbana tsy azon'ny governemanta afenina ary tsy azon'ny vahoaka odiana fanina. Ankoatra ny olan'ny zavo-tsetroka ny olan'ny fako isan-tokantrano sy ireo fako plastika isankarazany .
Ny Fanjakan'ny Plastika“, fanadihadiana iray manoritsoritra ny fandotoan'ny fako plastika ny faritra maro ao amin'ny firenena, nahatohina ny maro ary niteraka adihevitra maro taorian'ny nandefasana azy tamin'ny fahitalavitra sy ny fampitam-baovao isan-karazany.
Nandany telo taona tamin'ny fanatontosana ilay filma Wang Jiuliang, mpanantontosa horonantsary mahaleotena, nitsidika ireo foibe fanodinana plastika manerana an'i Shina mba hampisongadinana ny lafiny ratsin'ny indostiria, izay tsy dia tena fantatry ny vahoaka.
Asehon'ny filma ny maha-mampidi-doza amin'ny fahasalaman'ireo mpiasa mikirakira ny fanavahana ny fako plastika ireo fako ireo. Ankoatra ny fofona ratsy, ny ankamaroan'ny fako dia ahitana singa mampidi-doza misy poizina sy mihinan-koditra, izay mora mahavoa ireo mpiasa. Mahatonga ny fahalotoana ao an-toerana ihany koa ny fampiasana rano amin'ny dingana fanodinana. Alefa mankany amin'ny renirano tsy misy fikarakarana ny rano maloto, ka mahatonga ny rano hita maso sy ambany tany ho tsy azo ampiasaina sy mampidi-doza. Manimba ny rivotra iainana ny fandoroana plastika. Mazàna ahitana ny aretina homamiadana any amin'ireo toerana maro misy orinasa mpanodina plastika
I Shina no mpanodina fako goavana indrindra erantany, eo amin'ny 70 isanjaton'ny plastika azo ahodina sy ny fako avy amin'ny tsena iraisampirenena dia mankao Shina avokoa
Ankoatra ny fako plastika nohafarana, mamokatra fako betsaka ihany koa i Shina. Telo taona lasa izay no nalaza i Wang tamin'ny alalan'ilay horonantsary “Beijing Besieged by Waste” [Beijing ataon'ny fako fahirano], fanadihadiana iray hafa momba ny fanodinana fako sy ny fandotoana manodidina ny renivohitra.
Miisa 20 tapitrisa eo ho eo ny mponina any Beijing, ka miteraka fako 30 000 taonina isan'andro izany. Nanomboka ny taona 2008 ka hatramin'ny taona 2010 dia nitsidika toerana fanariam-pako miisa 460 ara-dalàna na tsia i Wang mba hanangonana tahirin-kevitra mikasika ireo fako, ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana, sy ireo olona mivelona amin'ireo fako ireo, anisan'izany ireo olona madinika mpanodina ny fako, ireo toerana maitso manodidina ny toerana fanariana fako, sy ireo biby fiompy mihinana ireo fako. Nanolotra fampahalalam-baovao sy fampahatsiahivana momba ny tontolo iainana an-drenivohitra ilay lahatsary.
Nipoitra io tetikasa taorian'ny nanontanian'i Wang ireo toerana fanariam pako ao Beijing. Nampiasa ny Google Earth izy mba hitadiavana ireo toeram-panariana fako an-jatony nandritra ny telo taona, ka namorona sarintany misy teboka izay mametraka faribolana lehibe manodidina ny renivohitra.
Sarintany avy amin'ny Wang Jiuliang mikasika ireo toerana fanariam-pako manodidina an'i Beijing
Niteraka ahiahy teo anivon'ny fiarahamonina ilay horonantsary ka nahatonga ny monisipaliten'i Beijing nanome vola 10 lavitrisa yuan (1,65 lavitrisa dolara) hanadiovana ireo toerana fanariam-pako.
Na dia tsy miraharaha ny tontolo iainana aza ny manampahefana Shinoa mitozo amin'ny fandrosoana ara-toekarena, lasa olana goavana eo amin'ny vahoaka ny ady amin'ny fandotoana rehefa nahalala bebe kokoa momba ny fahalotoan'ny rivotra, ny vokatra voapozina sy ny rano voaloto izy ireo. Araka ny lahatahirin'ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 2013, manodidina ny 70% amin'ny 20-50 tapitrisa taonina amin'ireo fako elektronika isan-taona dia natsipy any Shina avokoa, ary ny sisa kosa mankany India sy ny firenena Afrikana. Mazava izany fa i Shina no toerana fanariana fako elektronika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao
Nandritra ny folo taona farany, ny tanànan'i Guiyu, faritra atsimo-atsinanana, faritra indostrialy lehibe indrindra ao Shina, no lasa toby lehibe fanariana ireo fako elektronika. Olona an'arivony maro no niasa mafy mba hanasamatsamahana ny piesy elektronika erantany.
“tsy misy ilaina azy ary tsy manan-tsanda raha oharina amin'ny vola lany amin'ny resaka tontolo iainana sy ny fari-piainan'ny olona ny fahombiazana ara-toekarena ao Shina nandritra ny folo taona farany”, hoy i Wang raha nanaovana antsafa natao tamin'ny Desambra lasa teo izy.
Naneho ny fahatafintohinany sy ny hatezerany ny olona tao amin'ny tranonkalan'ny Shinoa mitovy amin'ny Twitter antsoina hoe Weibo, taorian'ny nijereny ny tatitra momba ny “Fanjakan'ny plastika” tao amin'ny fahitalavi-panjakana.
Nanambara i Yang Boxu, mpampianatra mpanao gazety iray ao amin'ny Anjerimanontolon'i Beijing fa ny indostrian'ny fanodinana fako dia toy ny ” famonoana ny Shinoa mba tsy ahafahany manana taranaka”. Ny mpiseran'ny tranonkala Weibo “Miaina any amin'ny tempolin-tendrombohitra” (@若山居) nihiaka hoe:
Tsy mahagaga raha lasa mifindra monina ireo mpanankarena sy matanjaka rehetra eto amin'ny firenena. Lasa toerana fanariam-pako i Shina. Ary isika, vahoaka madinika, dia tsy afa-miala eto amin'ity firenena ity (miaina miaraka amin'ny fako ]
Naneho hevitra maneso ny mpisolovava Xu Zhibiao hoe:
Satria nifindra monina izy ireo na efa vonona ny hifindra monina any Amerika. Tsy tanindrazan-dry zareo intsony i Shina.
Mpisera “Sysiphe manosika vatobe eny an-tendrombohitra avo” nanoritsoritra ny sehatra nalaina avy amin'ny “Plastic Kingdom” [Fanjakam-plastika] :
Raha nanontany mpiasa iray ilay mpamokatra horonantsary hoe nahoana ianao no miasa amin'ny alàlan'ny fikirakirana fako, dia hoy ilay mpiasa madinika fa ho famelomana ny zanany sy ny ray aman-dreniny izany. Indrindra ho an'ny zanany, izay nipetraka teo ambon'ny fako, maloto sy manana endrika malahelo. Ahoana moa ny olona iray no tsy mahalala sy tsy mahefa tahaka izany? Ahoana no ahafahan'ny olona miaina amin'ny izany fiainana marefo izany !
Nanasongadina ny “Fanjakan'ny plastika” tao amin'ny sehatra natokana ho an'ny daholobe ny vavahadim-baovao Tecent ary nahitana fanehoan-kevitra an'arivony izany. Nimenomenona ny mpisera “Cappuccino”:
Tena malahelo aho rehefa mahita izany. Etsy ankilany ny mpiasa mikirakira fako, etsy andaniny ny zanany tezaina sy mihalehibe ao anatin'ny fako. Aiza ireo lalàna ? Moa Tsy fantatry ny lehibeny ve fa tsy ara dalana izany sy manimba ny tanànany? Ilay adala ity
Mihevitra ny mpisera aterineto “Fandeferana” fa mbola miavo-tena noho ny filozofia ankehitriny momba ny vola ireo indostria :
Ny filozofia shinoa amin'ny fomba fitadiavam-bola: tsy mieritreritra ny amin'ny fomba fitadiavam-bola ny olona; tsy toy ny mpivaro-tena, tsy miraharaha fahantrana.
Nilaza ny mpisera aterineto “Asara” hoe :
Rikoriko sy tezitra aho rehefa mahita izany. Manontany tena aho raha ho faty noho ny fahasimban'ny tontolo iainana ny vahoaka Shinoa, na dia tsy misy ny Amerikana sy ny Japoney manafika aza .
Naneho hevitra momba ny indostirian'ny fanodinana sy ny fahasimban'ny tontolo iainana tamin'ny vavahadim-baovao hafa, NetEase Ireo mpiserasera Shinoa
mahita olana amin'ny kolikoly ny mpisera aterineto “Shuangziyijia” :
Mivarotra izay rehetra azony amidy ireo tompon'andraiki-mpanjakana hahazoam-bola… Ny zanany mifindra monina any ivelany…. Mandrafitra ny homamiadana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny olombelona ny fahefana feno tsy misy fanaraha-maso